गौर हत्याकाण्ड : मुख्य दोषी उपेन्द्र यादव – Idea Khabar
गौर हत्याकाण्ड : मुख्य दोषी उपेन्द्र यादव
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक ८, शुक्रबार १०:३६
गौर हत्याकाण्डका मुख्य दोषी भएको भन्दै पीडितहरुले कारवाहीको आवाज उठाउन थालेका छन् । काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई ‘इटभट्टा काण्ड’ मा दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुको पनि न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।
पीडितहरुले २०६३ चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरमा भएको उक्त हत्याकाण्ड समाजवादी फोरमका अध्यक्ष र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको योजनामा भएको बताएका छन् । घटनामा माओवादीको २८ जना नेता कार्यकर्ताको हत्या गरिएको थियो । २७ जनालाई लखेटीलखेटी स्थलमै हत्या गरिएको थियो भने १ जनाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा । दर्जनौं घाइते । उनीहरुले न्यायको लागि भन्दै यादवलाई कारवाहीको माग गर्दै दिएको जाहेरी जिल्ला अदालत रौतहटमा विचारधिन अवस्थामै छ । तर, यादव जहिले पनि सरकारमै हुने भएकोले उक्त घटनाको पीडितहरुले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
माओवादी निकट मधेसी मुक्ति मोर्चाको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि यादवका कार्यकर्ताहरुले हतियारसहित आक्रमण गरी मोर्चाका कार्यकर्तालाई लखेटी लखेटी बिभत्स हत्या गरेका थिए । स्थलतगत अध्ययनका अनुसार यादवले भारतमा अत्याधुनिक हतियारसहित पेशेवर हत्यारालाई भाडामा ल्याएका थिए ।
घटनाका मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । सत्ता र शक्तिको आडमा यादवले अहिलेसम्म उक्त घटनालाई अगाडि बढ्न दिएका छैनन् ।
आलमले चुनावको बेला भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई ज्यूदै इटा भट्टामा हालेर जलाएको प्रमाणसहित प्रहरीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अब यादवमा कारवाही अगाडि बढाउन गौर हत्याकाण्डका पीडितले पनि माग गरेका छन् ।
घटनापछि काठमाडौँबाट पत्रकारको टोलीले गौरका स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीले गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्र यादकै योजनामा र नेतृत्वमा भएको थियो । उक्त दिन यादव पनि गौरमै रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यादवले भारतीय पेशेवर हत्यारालाई अत्याधुनिक हतियारसहित गौरमा उतारेका थिए । तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता समेत रहेका यादवले माओवादीले पूर्व घोषित कार्यक्रम स्थलमै कार्यक्रम राखेको थिए । कार्यक्रम शान्तिपूर्ण गर्ने सहमति भएपनि यादवका कार्यकर्ताले मोर्चाको मंचमा आजगनी गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । एकै छिनमा यादवका कार्यकर्ताहरुले हतियारसहित लखेटी लखेटी मोर्चाका कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए । महिलाहरुलाई बलात्कार गर्नुको साथै चरम यातना दिएर पाशविक तरिकाले हत्या गरिएको स्थलगत रिपोर्टमा उल्लेख छ । समाचारमा दोहोरो भिडन्त भनेर आएपनि त्यो सबै झुट भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ पत्रकारको टोलीले तयार गरेको स्थलगत रिपोर्टः
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौर बजारमा भएको नृशंस नरसंहारको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका परस्पर अन्तरविरोधी कुरा बाहिर आइरहेका छन् । नरसंहारको वास्तविक तथ्य के हो त ? पत्रकारिताको दृष्टिकोणले समेत सत्यरतथ्य बुझ्न र घटनाको अध्ययन गरी यथार्थ विवरण प्रकाशमा ल्याउन विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको एक स्थलगत अध्ययन टोलीले चैत्र १२ र १३ गते घटनाका प्रत्यक्षदर्शी एवं सहभागीहरु तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) रामकुमार खनालसँग समेत व्यापक सोधपुछपछि प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा तयार गरिएको संक्षिप्त घटनारविवरण यसप्रकार रहेको छः
कहाँ र कहाँ कति मारिए ?
पुरानो राइसमिल चौरस्थित मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चार्को मञ्च वरीपरी नै ५ जना कार्यकर्ताहरुको हत्या भयो । गोली लागी घाइते भएकाहरुलाई लाठी, फट्टा र खुकुरीद्वारा निर्मम ढंगले प्रहार गरी हत्या गरिएको वाई।सी।एल। उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादवको दाबी छ। उक्त घटनामा मारिएकी प्रतिमा खातुनलाई दर्जनौं फोरमका कार्यकर्ताहरुले बलात्कार गरी छट्पटाइरहेकी अवस्थामा आगो लगाई हत्या गरे। त्यसैगरी अर्को निर्मम हत्या हजमनिया बोधिमाई मन्दिरमा भएको छ। गौरबाट करिब पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहेको बोधिमाई मन्दिरमा र्सलाहीतर्फ भाग्दै गरेका मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चार्का कार्यकर्ताहरुलाई फोरमका कार्यकर्ताहरु तथा भारतीय पेशेवर हत्याराहरुले बाग्मती नदीबाट कब्जा गरेर ल्याई ‘माओवादीलाई बलि दिनुपर्छ’ भन्दै सामूहिक रुपमा एघार जनाको हत्या गरेका छन्।
उक्त घटनामा हत्या गरिएका रेखा परियार, उषा थापा र सरस्वती उप्रेतीलाई फोरमका कार्यकर्ताहरुले दर्जनौं पटक बलात्कार गरी गुप्ताङ्गमा बाँसका लाठी घोंचेर स्तन काटेर तड्पाई(तड्पाई जिउँदै आगो लगाएका थिए।सेतै फुलेका करीब ७० बर्षीया प्रत्यक्षदर्शी एक वृद्धाले त्यस्तो घटना आफुले जिन्दगीमा नदेखेको बताएका छन्। आक्रोश र आतंकित भावमा ती वृद्धाले बलात्कृत महिलाहरुले ‘आफूहरुलाई बिहे गर तर नमार’ भनेर अनुनय(विनय गर्दा पनि फोरमका ती बलात्कारीहरुले उनीहरुलाई छोड्नुको सट्टा जिउँदै आगोमा लगाइएर मारेको बताए। अरुहरुलाई फट्टा, इँटा, ढुंगाले निर्मम प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। घटनास्थलमा रहेको गाउँलेहरुलाई खेदेर र घटनाबारे बताए मार्ने धम्कीसमेत दिइएको थियो।
त्यसैगरी अर्को घटना गौर बजारभित्रै रौतहट गेष्ट हाउस नजिक रहेको एउटा फुसको घरमा लुकी बसेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई बाहिर थुती गोली हानेर भाला, खुकुरी, ढुङ्गा, इट्टाले कुटीकुटी मारेको कुरा घटनाबाट भाग्न सफल विन्देश्वर यादवले बताए। उनका अनुसार घरका छतछतमा बसेका फोरमका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुले भागेर लुकेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरु बसेको ठाउँ देखाएका थिए र एक(एक गरी निर्मम ढंगले हत्या गरिएका छन्। हत्याराहरु हातरहतियारसहित आफुहरुमाथि जाइलागिरहँदा प्रहरीले मुकदर्शक भएर हेरेको उनको दाबी छ।
अर्को घटना गौरबाट करिब एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको लक्ष्मीपुर गाउँमा भएको छ। त्यहाँ एक घरमा शरण लिएर बसेको रमाकान्त चौधरीलाई करिब १०(१५ जना फोरमका कार्यकर्ताले घरबाट निकालेर भाग्दै गर्दा लखेटीरलखेटी हत्यागरी बाँसको झाँङमा लगेर फालिदिएका थिए। नाम नबताउने शर्तमा स्थानीय एक किसानले ती अपराधीहरुले मारिसकेपछि रमाकान्तसँग भएका मोबाइल, काजगपत्र र नगद रुपैयाँसमेत लुटेर लगेको र साँझपख प्रहरीहरु आई उक्त लाश लगेको बताएका छन्।
यसैगरी नेपाली सेनाको भद्रकाली गण रहेको स्थान नजिकको शिर्शिया र मडलवाको चौरछेउ अन्य तीन जनालाई फट्टा, ढुंगा र इटा प्रहार गरी अशक्त घाइते बनाएर गहुँ बारीमा घिसारी(घिसारी मारेको निसान अहिले पनि देख्न सकिन्छ। टोली घटनास्थल पुग्दा हत्याको क्रममा मिचिएको गहुँमा रगतैरगतको टाटा र रक्तरंजित कपडा त्यहीँ थियो। अर्को एक जना मोर्चाकार्यकर्तालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नजिकै हत्या गरी नालामा फालिएको नाम बताउन डराउने स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
मारिएकाहरु अधिकांशलाई स्वचालित हतियारले गोली हान्नुका साथै बाँसको फट्टा, ढुङ्गारइट्टाले टाउको र मुखमा थिचेर, धारिलो हतियार प्रहार गरेर, टाउको लगायत संवेदनशील स्थानहरुमा जथाभावी घोचेर, महिलाहरुलाई बलात्कार गरी स्तन काटेर छट्पटीरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो।
उनीहरुका अनुसार हत्यारा(गुण्डाहरुले तिमीहरु गाँउ छोडेर जाओ, माओवादीलाई यहाँबाट सिध्याउनुपर्छ, तिमीहरु गएनौं भने मर्र्छौ भन्दै थर्काउने गरेका छन्। ज्यान जाने डरले नाम नखुलाउने शर्तमा उनीहरु भन्छन् – ती हत्यारा फटाहाहरु अझैं पनि यहीं वरिपरि घुमिरहेका छन् तर प्रहरीरप्रशासनले कुनै वास्ता गर्दैन। तथापि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरका एस.पी.रामकुमार खनाल भने त्यहाँ घटना भइसकेपछि आफू नै चारपटक सम्म गैसकेको जनता आतंकित भएर आफूहरुसित पनि बोल्न नचाहेको दावी गर्छन्।
अजय गुप्ता शाही सत्ताका मेयर हुन् भने बाबुलाल, गौरीशंकर भू.पू. मेयर र बलरामसिंह कुँवर भ्रष्ट भुतपूर्व न्यायाधीस र शम्भू साह खुंखार मानव तस्कर भएको बताइन्छ । रौतहटको सिर्सिया, हजमनिया, गौर, भारतको सितामणी, ब्रम्हपुरी, मोतिहारी क्षेत्रहरु इन्डियनहरुको गढ मानिन्छ । रक्सीका भट्टीहरु चलाउने, गिरोहहरुलाई तालिम दिने, हातहतियार खरिद तथा सप्लाई गर्ने यिनीहरुको पेशानै भएको जनसमुदायहरु बताउँछन्। पञ्चायत कालमा खुंखार मण्डले, तस्कर जनयुद्धको शुरुवात पछि जनकारबाहीमा परी विस्तापित भएका र माओवादी प्रतिकार समिति समूहमा संलग्न हिजोआज मधेसी फोरम नामक आपराधिक गिरोहमा यी व्यक्तिहरु संलग्न रहँदै आएका छन्। यस गिरोहमा कतिपय दलका आपराधिक व्यक्तिहरु पनि संलग्न रहेको स्थानीय माओवादीहरु बताउँछन्।
घटना सुनियोजित देखिन्छ । किनकि हत्याकाण्डमा एकतर्फी रुपमा मोर्चाका कार्यकर्ता मात्र मारिएका छन् । मोर्चा र फोरमबीच झडप वा भिडन्त भनी अहिलेसम्म आएका समाचारहरु घटनास्थलको अध्ययनपछि साँचो मान्न सकिएन। हत्यामा भारतीय गुण्डाहरुको समेत प्रयोग भएको छ। हत्या अत्यन्तै पाशविक, जंगली, बर्बर र निर्मम छ। महिलाको स्तन काटेर, बलात्कार गरेर, योनीमा लठ्ठी धुसाएर, ढुंगाले टाउकोमा हानेर, काटेर मन्दिरमा घुमाएर अति बर्बर ढंगले मारिएको छ। पेशेवर गुण्डारहत्याराबाहेक राजनीतिक(विचारमा चल्नेहरुबाट यस्तो जघन्य अपराध हुनै सक्दैन। घटनाको स्थलगत अध्ययन र प्राप्त तथ्यहरुको आधारमा विश्लेषण गर्दा कार्यक्रमको विवादको निहुँ बनाएर यो घटना सुनियोजित देखिन्छ। फौजी तालिमप्राप्त व्यक्तिहरुबाट कहाँबाट फायर खोल्ने, मोर्चाका कार्यकर्तालाई कसरी घेरामा पार्ने भनेर पहिले नै योजना बनाएको देखिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेको दावी गर्ने फोरमले हतियारधारी जत्थाको प्रयोग गरी मच्चाएको गौर नरसंहारले लोकतन्त्र मास्न र संविधानसभा हुन नदिन ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको कुरा उजागर गरेको छ ।
राजेन्द्र महर्जन- मूल्यांकन मासिक
के.पी. ढुंगाना- राजधानी दैनिक
दीपक खनाल – पहल साप्ताहिक
सागर श्रेष्ठ – फोटो पत्रकार, आइ. एन. एस.
प्रवीण देवकोटा – कालिका एफ.एम. चितवन
प्रकाश ज्ञवाली – कायाकैरन, चितवन
रुपा महर्जन- झिगु स्वनिगः
सुरेशचन्द्र अधिकारी – चुरे सन्देश, चितवन
ओम शर्मा – क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नेपाल
चेतन कुँवर – नवचेतना मासिक
खिलबहादुर भण्डारी – संश्लेषण मासिक
निर्मल ज्ञवाली – कृष्णसेन अनलाइन डटकम
कोभिड बढेपछि वैशाख १६ गतेदेखि राजधानीमा निषेधाज्ञा
२०७८ बैशाख १३, सोमबार २०:११
देशकै ठुलो ‘भ्रष्टाचारी’ अख्तियारकै प्रमुख : यस्तो छ राज्य दोहनको श्रृखला
२०७४ फाल्गुन ४, शुक्रबार १४:०१